‘राष्ट्रपति प्रभावमा पर्नुभयो’ – Famous Nepal
Posted on November 10, 2017 at 2:26 pm by फ्यामोस नेपाल
चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेर शृंखलाबद्ध अनसन गर्दै आएका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले राष्ट्रपति, न्यायालयलाई समेत चुनौती दिँदै पुनः अनसनको चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रपतिलक्षित उनको पछिल्लो अल्टिमेटमलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । :
अर्को अनसनका लागि फेरि अल्टिमेटम दिनुभएछ नि ?
हामी देशको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीयताका कायम गर्न यतिका समयदेखि लडिरहेका छौं । यस क्षेत्रको गुणस्तरीयता तब कायम हुनेछ, जब हामीले दिएको सुझाव समेटेर चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउने छ । त्यसका लागि हामीले पटक-पटक सत्याग्रहसँगै सडक आन्दोलन गरिसकेका छौं ।
अध्यादेश प्रमाणीकरण भएन भने ?
राष्ट्रपतिले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याउनुहन्छ भन्ने विश्वास मलाई अझै छ । उहाँले जनताका लागि उक्त अध्यादेश ल्याउनैपर्छ । यदि कुनै बहानाबाजी गरेर त्यसलाई तत्कालै प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रिपतिलाई समेत हामी सडकमा ल्याउनेछौं । यसअघिका मेरा अनसन तोडाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । त्यसका लागि उसले आफूबाट हुने काम सम्पन्न गर्दै प्रमाणीकरणका लागि समयमै राष्ट्रपतिसमक्ष समेत पठाएको थियो । तर त्यहाँ अहिले अध्यादेश नल्याउने खेल भइरहेको छ ।
राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई समेत यसरी विवादमा तान्ने अभिव्यक्ति किन दिनुभएको ?
तीन करोड नेपालीको राष्ट्रपति भएर पनि विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीको मात्र राष्ट्रपति भएजस्तो व्यवहार देखाउनुभयो । उहाँले नितान्त आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर समयमै अध्यादेश ल्याउनुपर्ने थियो । तर उहाँ माफियाको जालोमा फस्नु भयो । संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उहाँको पनि काम हो । यसअघि उहाँले म अनसन बस्दा सरकारलाई मेरो माग पूरा गर्नुपर्छ भन्दै सल्लाह दिनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँ आफ्नै पार्टीका माफियाहरूको जालोमा फसेर अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्ने खेलमा लाग्नुभएको छ । हामी आम नेपाली गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुगून् भनेर सत्याग्रहसँगै सडक आन्दोलनमा पनि होमिसकेका छौं । राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि एक साताको अल्टिमेटम मैले सोमबारै दिइसकेको छु । अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्ने खेलामा उहाँ लाग्नुभयो भने त्यसअघि नै म अनसन बस्नेछु ।
राष्ट्रपतिले किन प्रमाणीकरण नगर्नुभएको ?
काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार अन्य मेडिकल कलेजका सञ्चालक र आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन । मानवअधिकार र नागरिक समाजका सदस्य भएको भन्दै सल्लाहकारका रूपमा एमालेका कार्यकर्ताहरूले समेत राष्ट्रिपतिलाई भड्काइरहेका छन् । जुन हामीलाई मान्य छैन । राष्ट्रपतिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा पाउने जनताको नैसर्गिग अधिकार सुनिश्चत गर्न अध्यादेश ल्याउनैपर्छ ।
तपाईंले न्यायालयलाई समेत मान हानि हुनेगरी वक्तव्य दिनुभएछ, किन ?
सर्वोच्चले समेत माफियाहरूको स्वार्थमा गलत फैसला गरेको छ । अध्यादेश तुहाउन त्यस्तो फैसला भएको हो । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जसरी त्रिविलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । त्यो एकदमै गलत छ । सर्वोच्च अदालतसमेत न्यायको बिक्रीमा लाग्दा हामीलाई धेरै दुःख लागेको छ । सर्वोच्चको गलत फैसलाविरुद्ध समेत म लड्न तयार भइसकेको छु । अब मेरो लडाइँ सर्वोच्चको नेतृत्व गरिहेका विरुद्ध हुनेछ । मैले मान हानि गर्‍यो भन्छन् । न्यायाधीशको मान नै छैन, उनीहरूको कसरी सम्मान हुन्छ ? माफियाकै हितमा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका सम्बन्धनमा सर्वोच्चले गलत फैसाला गरेको छ । गलत फैसललाई आधार मानेर गैरकानुनी रूपमा कलेजलाई सिट दिन प्रोत्साहन गर्ने शिक्षामन्त्रीविरुद्ध समेत लड्ने छु ।
आईओएमको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा विवादित हुँदा तपाईंले मौनता साँधेको आरोप छ नि ?
महाराजगञ्जस्थित चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)को एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाका बेला भएको चिट चोरी काण्डमाथि छानबिन गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । चिट चोरी काण्डका कारण आईओएमले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाई गरेको छ । र, त्यसको असर विद्यार्थीमा परिरहेको छ । घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो । तर पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यहाँ पनि माफियाको प्रभाव छ । त्यसविरुद्ध पनि म लाग्नेछु । मलाई अब कुनै डर छैन । जनता मेरो साथमा छन् ।
विनोद केसी प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार म्याग्दी क्षेत्र नं. १ ‘क’ प्र देश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा म्याग्दीको प्रदेशसभा क्षेत्र…